Ipulangwe elibhekene nefilimu
Umunwe - Ipulangwe Elibhekene Namafilimu
I-Anti Slip Film Ebhekene ne-Plywood
Ukufakwa kwefektri nokupakisha
Ipulangwe elibhekene neCombi Film
I-Hexagon Anti-slip Film Plywood Ebhekene nayo
Ifilimu elihlanganiswe ngeminwe libhekene ne-plywood brown
I-Poplar Film ipulangwe elibhekene nalo
I-Negative-grain Anti-slip Ifilimu Elibhekene Nalo
1. Isisindo esilula, esifaneleka kakhulu ezakhiweni eziphakeme kanye nokwakhiwa kwebhuloho.
2. Kulula ukuhudula ifilimu, yi-1/7 kuphela yesikhunta sensimbi.
3. Yenza ukhonkolo obheke ngokulingana: ubuso bento ethelwe bushelelezi futhi buhle, kukhishwe inqubo yesibili yokufaka udonga, ingahlobisa ngqo i-veneer, inciphise isikhathi sokwakha ngo-30%.
4. Corrosion ukumelana, akukho ukungcola ebusweni ukhonkolo.
5. Ukusebenza okuhle kokushisa okushisayo, okulungele ukwakhiwa kwasebusika.
6. Ingasetshenziswa njengesifanekiso sokwakheka.
7. Ukusebenza okuhle. Ukusebenza kwe-nail, saw kanye ne-drill kungcono kune-bamboo plywood kanye nezikhunta zensimbi ezincane. Ingacutshungulwa ibe izifanekiso zezimo ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo zokwakha.
I-Wire-mesh Anti-slip Film Plywood Ebhekene nayo
Ngokuya ngohlobo lobuso / emuva, izinkuni ezibhekene nolwelwesi zingahlukaniswa zibe yipulangwe elibhekene nolwelwesi olubushelelezi kanye nepulangwe elibheke ulwelwesi olungasheleli. Le plywood yodonga olungasheleleki langaphandle line ungqimba lwefilimu ye-phenolic engagugi ebusweni, ehlanganiswe ngamakhemikhali ebusweni ngokushisa nangokucindezela. Ukhuni lwe-anti-slip film surface luvame ukusetshenziswa njengezinto eziphansi zezimoto.
Ifilimu elihlanganiswe ngomunwe libhekene neplywood emnyama
1. I-plywood yefilimu esetshenzisiwe kabusha iyinhlobo yomkhiqizo eshibhe kunazo zonke ebhodini lamathempulethi lomhlaba jikelele.
2. Ingasetshenziswa izikhathi ezingama-2-4 ngaphansi kwezimo ezijwayelekile.
3. Guqula ipulangwe elisetshenzisiwe libe ipulangwe elisha, wonge imithombo yezinkuni / yehlathi.
Ipulangwe le-Sulong lisebenzisa kuphela ipulangwe lesibili elikhethwe ngokucophelela ukuqinisekisa ikhwalithi yengqikithi.
4. Ipulangwe le-Sulong licutshungulwa ngaphambili, zama ukuhlanza udoti wangaphakathi kokhonkolo, kunethuba elingu-90% lokuthi ngeke lisuswe.
Yiba nesitifiketi se-CE ne-ISO
Ifilimu: ifilimu lasendaweni / ifilimu engenisiwe, uhlobo olungasheleli.
Umbala: ifilimu elimnyama, ifilimu ensundu, ifilimu eluhlaza, ifilimu empunga, ifilimu ebomvu, nsundu, nsundu ebomvu,
Okubalulekile: i-poplar, umgogodla wokhuni oluqinile, umgogodla we-eucalyptus, i-birch noma i-core composite. Faka ingqikithi
Glue: I-WBP melamine glue noma i-WBP phenolic glue. I-WBP melamine glue noma i-WBP phenolic glue
Ukuphinda usebenzise okuningi
Ukusebenza okuphezulu okungangeni manzi / kwe-WBP
Inqubo ekhethekile iqeda imifantu ngaphakathi kwengqikithi.
Kwenziwe ngentando ngokuvumelana nezidingo zakho
Ukukhiqizwa kwefektri yobungcweti iminyaka eminingi!
Ifilimu elibhekene neplywood elibomvu
Ipulangwe lebanga lezimboni lisho ukuthi kuzoba namaroll mark, imfucumfucu ohlangothini nemikrwelo elula ebusweni.
I-phenolic plywood, ifilimu ebhekene neplywood, i-phenolic resin plywood, i-Baltic birch core
Iphaneli ehlala isikhathi eside, ebushelelezi, iphaneli ekulula ukuyihlanza nephunga, efanelekile ukudla ngemiphetho yezakhiwo ngaphandle kokufakwa uphawu emaphethelweni
Izicelo: Ifenisha namakhabethe, ifenisha yezingane, imikhiqizo yezinkuni, ama-countertops aqinile, izindawo zokudlela, ukubunjwa kokhonkolo, amathuluzi nezinsiza.
Yiba nesitifiketi se-CE ne-ISO.
Ifilimu elihlanganiswe ngeminwe elibomvu ngepulangwe
Lo mkhiqizo u-1/8 x 12 x 12 plywood birch
Kalula futhi kulula ukuyisebenzisa
Lo mkhiqizo useChina
Ipulangwe elenziwe kabili, amathuba womhlangano angenamkhawulo
Faka isitayela sakho kuwo wonke ama-intshi aso
Lo mkhiqizo ufaka ipulangwe lobuciko elingu-12 x 12 x 1.27 CM (cishe usayizi)
Ifaneleka kakhulu kuzo zonke izinhlobo zobuciko
Izinto ze-birch zinokuqina okuhle kakhulu, ukuqina nokuqina.
Azikho izingqimba noma amabala. Easy ukusika, udayi, isihlabathi nopende.
Ipulangwe elihle lesaha eligingqekayo linamandla amakhulu okunamathisela namandla okugcoba ebusweni.
Film Sibhekene Plywood Inhlanganisela
Ifilimu ebhekene nefilimu i-Eucalyptus emnyama
Ifilimu ebhekene nefilimu isetshenziswa kakhulu emkhakheni wokwakha. Ngakho-ke, ipulangwe elifakwe ifilimu libizwa nangokuthi i-shutter-camera plywood, ifomu likakhonkolo, kanye nefreyimu yekhonkrithi. Ngenxa yalokhu kusetshenziswa ekugcineni, amakhasimende ngokuvamile adinga ipulangwe elifakwe ifilimu le-WBP, elifanele kakhulu ama-shutter kumaphrojekthi amakhulu. Kepha kukhona namanye amakhasimende adinga i-MR plywood embozwe ngefilimu, esetshenziselwa izimpumputhe kumaphrojekthi afanayo.
Ifilimu ebhekene nefilimu iBirch brown
Indawo Yokuthuthukiswa Komnotho, Idolobha LasePizhou, Isifundazwe saseJiangsu, eChina